Umshini weRealme TechLife Robot, uhlalutyo olunzulu | Iindaba zeGajethi
UMiguel Hernandez | 30/06/2021 14:00 | elektroniki, ngokubanzi, Reviews
I-Realme mva nje ineshedyuli yokukhutshwa okumangalisayo, kutshanje sikubonise isixhobo sayo samva nje esiphakathi kwinqanaba eliphakathi, iReal GT, ebeluyolo lwabasebenzisi abaninzi. Kwangelo xesha linye siye sakwazi ukubona iiwotshi ezintle. Nangona kunjalo, imveliso esikulethela yona namhlanje mhlawumbi yinto obungayilindelanga, isicoci seerobhothi.
I-Realme TechLife Robot Vacuum kukumiliselwa kwegama elitsha, isicoci sokucoca iirobhothi esothusayo ngomgangatho wokusebenza / wexabisoNgaba iyasinika izinto ezintle kangaka? Sihlalutya nzulu le Realme yokucoca iirobhothi kunye nazo zonke iinkcukacha zayo, fumana nathi.
Njengamaxesha onke, sifake ividiyo ephezulu malunga nejelo lethu YouTube apho uya kuba nakho ukujonga ukungabikho kwebhokisi epheleleyo yale Realme yokucoca iirobhothi kunye nokucoca kunye nokuvavanya isandi. Thatha ithuba lokubhalisa kwisitishi sethu YouTube kwaye usishiye nayiphi na imibuzo.
1 Izinto kunye noyilo, iiklasikhi azisoze zasilela
2 Iitanki kunye neenkqubo zokucoca
3 Isiseko sokutshaja, ukuzimela kunye nokusetyenziswa
4 Amandla okufunxa kunye namava okucoca
Izinto kunye noyilo, iiklasikhi azisoze zasilela
Igama elisemthethweni ngu Umshini weRealme TechLife Robot, kodwa ngokunyanisekileyo, kulo lonke uphononongo siza kulubiza ngokuba yirobhothi yokucoca iRealme yoqoqosho ekufundeni. Esi sixhobo senziwe ngezinto zeplastiki ezahlukeneyo, njengoko unokulindela. Sithetha ngemveliso enkulu kakhulu, Iisentimitha ezingama-35 ubukhulu kunye neesentimitha ezili-10 ukuphakama, Ayisiyeyona nto inqabileyo kwintengiso kodwa ngokunyaniseka, ubungakanani banele.
Icandelo eliphezulu lithweswe ngenkqubo yenkanyamba, inqwelomoya emnyama emnyamaIya kuba ngumazibuthe wothuli (umdlalo weenkampani ezininzi zokucoca iirobhothi endingaziqondiyo) kunye namaqhosha amabini, elinye lesiseko sokutshaja kunye neqhosha le-ON / OFF. Sober kodwa intle, masijongane nayo, ijongeka intle phantse naphina. Yenziwe ngeplastiki kwaye ubunzima bebonke bujikelezile 3,3 iikhilogram zizonke.
Emazantsi sifumana iingalo ezimbini ezinebrashi zokucoca eziza kukhokelela kubumdaka kwindawo yokufunxa, ivili le- «idler» elijongene nokugcina isixhobo ngaphambili, amavili amabini adibeneyo ukoyisa imiqobo emalunga neesentimitha ezimbini, indawo yokutsala ngebrashi exubeneyo kwaye wabona itanki.
Iitanki kunye neenkqubo zokucoca
Sifumene idiphozithi engama-600 ml eqinileyo Kwinguqulo ebandakanya kuphela umnqweno, ukuba sithenga (ngokwahlukeneyo) ipakethe yokukhuhla le dipozithi iya kuncitshiswa ibe yi-350ml. KUNYEIbrashi ephethe ukufunxeka ixubekile, sineerabha endicinga ukuba zezona nguqulelo zifanelekileyo, kunye ne-nylon bristles eya kusinceda sifumane iziphumo ezifanayo. Ukugcinwa kwebrashi kunye nezinye izinto ngokubanzi, isixhobo sendalo yonke sifakiwe kwiphakheji.
Iibrashi ezimbini zecala zinceda ukuhambisa ubumdaka, ke isiphumo sokucoca siphezulu kancinci kunalezo zeerobhothi ezinayo inye kuphela. Inendawo yokucoca ngokulula ye-HEPA kwiphakheji, nangona kunjalo, asibandakanyi icala elisecaleni okanye iibrashi eziphambili, Kuya kufuneka sizifumane kwiindawo eziqhelekileyo zentengiso (asazi xabiso lezinto zokungcebeleka ngexesha lohlalutyo).
Ukurhoxisa idiphozithi kulula, icala langasemva "linamaqhosha" amancinci aya kuthi xa ecofiwe asivumele ukuba sikhuphe itanki eqinileyo. Kuyafana nangokukhupha okanye ukutshintsha isihluzo se-HEPA, esithi, ngendlela, sinefilitha yangaphambi kokucoca ulwelo ngokufanelekileyo.
Isiseko sokutshaja, ukuzimela kunye nokusetyenziswa
Ngokubhekisele kwisiseko sokutshaja, kufuneka nditsho ukuba ndifumene iinkcukacha zokuqala ezilungileyo. Esi siseko sinobungakanani obuqhelekileyo kunye noyilo, kodwa inzuzo yokuba ezinye iimveliso zibonakala ziyalibala. Inenkqubo yokuqokelela intambo emazantsi eya kuthi isivumele ukuba sidibanise isinxibelelanisi samandla ngaphandle kokuphuma, ngeevenkile ezimbini ezisecaleni ukuze singabinangxaki ekukhetheni indawo yesiseko sokutshaja, oku ngaphandle kwamathandabuzo kumncedisi ovavanya isibini sale nyanga, yinto entle kakhulu.
Eminye, iirobhothi zakwaRealme zisifumana ngokulula isikhululo sokutshaja, inokuba nengxaki ecothayo okokuqala, kodwa nje ukuba ibekwe emephini iya kuba sisiqwenga sekhekhe. Ixesha lokutshaja lilonke liya kuba malunga neeyure ezimbini kwi-5.200 mAh yalo isinika ukucoca ngaphezulu kwemizuzu engama-80 ngokomndilili.
Inkqubo yeRealme Link (Android / iOS) isikhumbuza ngoRoborock, kwelinye icala yenye yezona zibalaseleyo kwintengiso, ke amava ayathandeka ngokupheleleyo, sicebisa ukuba ujonge ividiyo apho sikubonisa khona lonke inyathelo ngenyathelo ngenyathelo kwaye uya kuba nakho ukubona iimvavanyo zovavanyo ezahlukeneyo.
Amandla okufunxa kunye namava okucoca
Sinamandla amakhulu okutsala ka-3.000 Pa, Nangona kunjalo, sizahlula phakathi kweendlela ezine zokucoca ezikhoyo kwisicelo:
Cwaka: 500 Pa
Eziqhelekileyo: 1.200 Pa
Ubuninzi: 3.000 Pa
Ukucocwa kwemihla ngemihla kuya kuba ngaphezulu kwanele kunye nemowudi eqhelekileyo, Nangona kunjalo, ukuba sifuna iziphumo ezitsala umdla wethu, siya kukhetha imowudi Turbo. Eyona ndlela iphezulu isagqithisile ngokwengxolo, apho ubuncinci buyakuba yi-55 dB.
Amava athande ngokukhethekileyo kwimephu, ekhawulezayo kwaye ithatha malunga nemizuzu engama-40 kumgangatho wesikwere se-72. Iyafuna kwaye inikezela ngeziphumo zokucoca ezilungelelanisa ngokulula izixhobo ezixabisa amakhulu ambalwa eedola ngaphezulu.
Ukuhambelana ne-Alexa kunye noMncedisi kaGoogle
I-WiFi 2,4 GHz
Inkqubo yokukhangela i-LiDAR
Ndigxininisa oku kulandelayo kwesicelo:
Ukubakho kokuthintela indawo yemephu kunye namagumbi athile
Lungisa ngokuzenzekelayo ukutsalwa ngokusekwe kuhlobo lomhlaba ofunyenwe
Ngokwam, khange ndikwazi ukuhlengahlengisa ulwimi kwiSpanish, ke kuye kwafuneka ndenze inyani yokuba isicoci sokucoca sithetha isiNgesi ngolwimi lwaseAsia. Ndamangaliswa kukuba incinci "intekenteke" ngemiqobo kunokuba ibiza kakhulu, Ihlala ingena phakathi kwemilenze yezitulo nangaphantsi kweesofa eziphakamileyo, into endothusileyo.
I-Realme TechLife Robot Vacuum ixabisa i-euro ezingama-379 kuphela, nangona okwangoku sinokuyithenga kuphela kwi-AliExpress ngezibonelelo ezithile (lumka ngamasiko) okanye iwebhusayithi yeRealme. Ixabiso elimela ukuba phakathi kwama-50/100 euros asezantsi kunezinye iindlela ezinikezela ngeziphumo ezifanayo.
Umshini weTechLife Robot
Ithunyelwe nge: 30 Juni ka 2021
Utshintsho lokugqibela: 26 Juni ka 2021
Umdibaniso olungileyo kunye neRealme Link kunye nemisebenzi
Umthamo omkhulu wokufunxa
Ukuzimela kakuhle kunye nokucoca okulula
Ibandakanya iindawo ezimbalwa zokugcina
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » elektroniki » Umshini weRealme TechLife Robot, isicoci seerobhothi esinomgangatho ophezulu / ixabiso
IJabra Elite 85t, phezulu kumgangatho weaudiyo kunye nokucinywa kwengxolo